भन्सारको सुरक्षाः त्रिपालको बास ! spacekhabar
भन्सारको सुरक्षाः त्रिपालको बास !
स्पेसखबर कैलाली १जेठ
कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–९ खक्रौलास्थित सत्ती भन्सार कार्यालयको सुरक्षार्थ खटिएका सशस्त्र प्रहरीको सीमा अवलोकन युनिट (बिओपी) का सुरक्षाकर्मी त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् ।
पुस/माघ महीनाको कठ्याङ्ग्रिने जाडो होस् वा चैत÷वैशाख महीनाको टन्टलापुर घाम नै किन नहोस्, उनीहरुको दिनचर्या त्रिपालमुनि नै बित्दै आएको छ । छोटी भन्सार कार्यालयबाट मूल भन्सारमा परिणत भएपछि त्यसको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी खटिएको हो । सो भन्सार कार्यालय गत साउनदेखि मूल भन्सारमा परिणत भएको थियो । त्यसको सुरक्षाका लागि गत कात्तिक २० गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ३५ सुरक्षाकर्मीकोे टोली त्यहाँ खटिएको छ ।
बीओपीका सुरक्षाकर्मी गोदाम निर्माणका लागि छुट्याइएको जग्गामा त्रिपाल टाँगेर बसेका छन् । उनीहरु नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले उपलब्ध गराएको सात थान त्रिपालमुनि बस्दै आएका छन् । सुरक्षाकर्मीका लागि उचित बस्ने बास पनि छैन भने शुद्ध खानेपानीको व्यवस्थासमेत छैन । सुरक्षाकर्मीको त्रिपालमुनिको बास निकै कष्टकर रहेको छ । गर्मीको समयमा बढ्दो तापक्रम र आउने हुरीबतासले कहाँ कतिखेर ती त्रिपाल उडाएर पुर्याउने हो ? थाह छैन ।
केही महीनाअघिको हिँउदे झरीले त्रिपाल चुर्लुम्म डुबेको एक सुरक्षाकर्मीले बताए । उनले वर्षाको समयमा पानी जम्ने भएका कारण बस्न नसकिने भन्दै गर्मीको समयमा नदीको किनार भएका कारण पनि अत्यधिक गर्मी हुन थालेको बताए । “होचो ठाउँमा त्रिपाल टाँगेर बसेका छौँ”, उनले भने्, “बाढी आयो भने जीउ ज्यान नै जोगाउन गाह्रो हुने देखिन्छ ।” कष्टकर अवस्थामा बसेर भएपनि सुरक्षाकर्मीले भन्सारको सुरक्षा गर्दै आएको छ, धनगढीस्थित ३४ नं गणका गणपति विष्णु भट्टले बताए।
उनले सुरक्षाका दृष्टिकोणले भौतिक संरचना निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै सुरक्षाकर्मी खटाउनु परेका कारण समस्या भएको जानकारी दिए । “हाम्रा लागि जग्गा पनि छैन । भौतिक पूर्वाधार पनि छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सुरक्षाको थ्रेट बढेपछि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनै पर्यो । अहिले घामपानी नभनेर पनि सुरक्षा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।” उनले बीओपीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार र सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग पहल भइरहेको बताउँदै वर्षा यामभन्दा अगावै बीओपीको व्यवस्थापन हुने भनिए तापनि हालसम्म कुनै काम शुरु नभएको जानकारी दिए ।
यसै सन्दर्भमा सत्ती भन्सार कार्यालयका प्रमुख वसन्त कार्कीले बीओपीका सुरक्षाकर्मीको बसोबासको समस्याले काम कारवाहीमा समेत समस्या भइरहेको बताए । उनले भन्सार व्यवस्थापनअन्र्तगतको बजेटबाट भए पनि बीओपीको बसोबासका लागि विभागसँग बजेट छु्ट्याउन माग गरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासका लागि आठ करोड ७१ लाख ५९ हजार ३२९ रुपैयाँ ६५ पैसाको लागत अनुमानित रकमको माग गरिएको बताए । चालू आवको मसान्तसम्म बीओपीका सुरक्षाकर्मीका लागि उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्न नसके वर्षात्को समयमा सीमा सुरक्षाका लागि ठूलो समस्या आउन सक्ने उनले बताए। उनले बीओपीका लागि भन्सारकै जग्गामा भवन निर्माण गरी व्यवस्थापन गरिने गरी काम भइरहेको बताउँदै चालू आवमा काम पूरा नभए पनि आउँदो आवमा भने व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन आफूले पाएको जानकारी दिए ।रासस
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६, ०८:५३:००